Ximin iyo Xeeb oo xiriirka u jartay DF - Caasimada Online
Home Warar Ximin iyo Xeeb oo xiriirka u jartay DF
Ximin iyo Xeeb oo xiriirka u jartay DF
Cadaado (Caasimada Online) Maamulka Ximin iyo Xeeb ayaa markii ugu horreysay wuxuu shaaciyay in uu xiriirka u jiray dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Madaxweynaha maamulkaas Cabdulaahi Cali Maxamed (Baar-Leex ) oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Cadaado ayaa sheegay in shir degdeg ah oo ay ku yeesheen dhammaan maamulka in la isku raacay in xiriirka loo jaro dowladda Soomaaliya, kaddib markii uu ku eedeeyay in wax taageero iyo xiriir aysan ka helin dowladda dhexe.
Wuxuu tilmaamay tan iyo markii la unkay maamulka Ximin iyo Xeeb sannadkii 2008-dii in wax xiriir ah aysan ka helin dowladihii KMG ah ee dalka Soomaaliya iyo dowladda iminka jirta ee caalamku uu aqoonsaday.
Madaxweyne Baarleex ayaa dowladda dhexe ku eedeeyay in dhammaan mashaariicda la rabay in la geeyo gobalada dalka loo lee xiyay deeganno gaar ah sidda uu hadalka u dhigay.
Dhinaca kale, waxaa hadalka uu sheegay madaxweynaha maamulka Ximin iyo Xeeb, waxaa ka soo horjeestay ku xigeenkiisa kaasoo shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa ayuu sheegay in hadalkaas uu yahay mid lagu fududaaday oo laga fiicnaa.
Wuxuu carabka ku adkeeyay in shacabka iyo maamulka Ximin iyo Xeeb ay ku saxan yihiin in go’aan ka gaaraan dowladda dhexe maamada wax taageero ah aysan ka helin, balse waa laga fiicnaa ayuu yiri in xiriirka loo jaro dowladda dhexe.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo ku aadan go’aanka ay gaareen maamulka Ximin iyo Xeeb kuwaas oo xiriirka u jiray dowladda dhexe.